Shiinaha Professional 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25 soosaarayaasha iyo alaableyda. Checheng
Xirfadle 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25
Shayga MAYA: CHE-S25
Our S25 waxaa si gaar ah loogu talagalay faahfaahinta culus iyo nadiifinta shaqada. 25mm waa masaafada ugu weyn eccentric-ka adduunka, waxay badbaadineysaa ugu yaraan 10% waqtiga shaqada isla dusha sare marka la barbardhigo kuwa kale ee DA-da. Waxay u shaqeysaa meel kasta oo loo baahan yahay xoog isku dheelitiran oo isku dhafan oo dhameystiran dusha sare loo baahan yahay. Awoodda awooda leh ee 900W matoorrada iyada oo loo marayo tan ugu badan ee oksijiin ah ee rinjiga. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku casriyeynay gudaha gudaha Dhamaan Jabka Japan NSK waxaanan xoojinay fiilada korantada si loo hubiyo inay sii socoto imtixaanka waqtiga. Faashad siigada ah iyo godad badan oo hawo-qaadasho ah ayaa lagu daray mashiinka jirka si looga hortago kuleylka soo kordhay. Kicinta horusocodka leh xakamaynta xawaaraha iyo jilitaanka bilawga jilicsan ayaa ka dhigaysa shaqaynta mid ammaan ah oo ku habboon. Xakamaynta xawaaraha suulka ku shaqeysa waxay siineysaa xakameynta xawaaraha isbeddelka 0 illaa 4800 OPM, ma kordhin doonto buuqa iyadoo la hubinayo waxtarka shaqada. Iyada oo leh S25, waxay ka dhigeysaa shaqada ugu adag ee nadiifinta mid wax ku ool ah oo fudud.
1pc 6in saxan taageero, 1pc kwo, 1pc D-xamil, 1pc buug, 1pc burush nadiifinta,
Burushka Kaarboon 1pr, 1pr fur + dhaqe
1 Fogaanta ugu weyn ee 25mm eccentric ee adduunka. Marka loo barbardhigo golayaasha kale ee wareega, waxay badbaadinaysaa 10% isla dusha sare.
2.Waxay ku rakiban yihiin dhammaan jaangooyooyinka NSK ee Japan iyo CNC saxda ah ee loo yaqaan 'STEEL' miisaanka culus, waxay ka dhigeysaa mid isku dheelitiran oo adkeysi leh.
3. Kicinta ku-beddelka horumarka, kiciyaha ayaa sidoo kale xakameyn kara xawaaraha kaas oo ka dhigaya mid ku habboon inta lagu jiro shaqada.
Waxay leedahay saxan taageerida qaboojinta oo aad u dhaqso badan kaas oo ka caawiya ka hortagga mashiinka inuu kulul yahay.
Mashiinka 900watt ee awoodda leh wuxuu si wax ku ool ah uga saaraa cilladaha dhaqso.
6.Foodhuuf si ay uga hortagto boodh ku dhaca nidaamka wareegga hawada, kaas oo ka ilaaliya mootada dhaawaca.
Hore: Tayada Sare 21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21
Iibinta Hot 15mm Dual Action Polisher 900W Car ...